MB 2018 Janoary - Fiangonan'Andriamanitra maneran-tany Switzerland
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2018 Janoary
Ireo fanapahan-kevitra rehetra ireo dia misy ifandraisany amin'ny finiavana maha-olombelona antsika, ka matetika izy ireo no miala. Nanaraka ny fahombiazan'ny fanapahan-kevitra momba ny taom-baovao tokoa ireo manam-pahaizana. Tsy mampirisika ny vokatra: 80% amin'izy ireo no tsy mahomby alohan'ny herinandro faharoa amin'ny Febroary! Amin'ny maha-mpino antsika dia fantatsika manokana ny maha-diso antsika olombelona. Fantatsika ny fihetseham-po nananan’ny apostoly Paoly tao amin’ny Romana 7,15 dia mamaritra toy izao manaraka izao: Tsy fantatro izay ataoko. Satria tsy manao izay tiako aho; fa izay halako no ataoko. Afaka mandre ny fahasosoran'i Paoly noho ny tsy fahampian'ny finiavany satria fantany tsara izay tadiavin'Andriamanitra aminy.
Soa ihany fa tsy mila fahavononana manokana isika Kristianina. Afaka mitodika amin’ny zavatra iray izay mahomby lavitra noho ny fahavononana hanova ny tenantsika isika: afaka mitodika amin’ny vavaka. Amin’ny alalan’i Jesoa Kristy sy ny fonenan’ny Fanahy Masina no ahafahantsika manatona amim-pahatokiana eo anatrehan’Andriamanitra Raintsika amin’ny alalan’ny vavaka. Afaka mitondra ny tahotsika sy ny tahotsika, ny hafaliantsika ary ny fanahiantsika lalina eo anatrehany isika. Olombelona ny mijery ny ho avy sy manantena ny taona ho avy. Raha tokony hanao fanapahan-kevitra tsara izay hanjavona tsy ho ela aho, dia mamporisika anao hiaraka amiko sy hanao fanoloran-tena 2018 mba hahatonga azy ho taom-bavaka.
Tsy misy zavatra tsy misy dikany loatra entina eo anatrehan'ny Raintsika be fitiavana. Saingy tsy toy ny fanapahan-kevitry ny Taom-baovao, ny vavaka dia tsy zava-dehibe fotsiny ho antsika. Azontsika atao koa ny mampiasa ny vavaka ho fotoana iray hitondrana ny ahiahin'olon-kafa eo anatrehan'ny Tompo.
Tena mampahery ny tombontsoam-bavaka amin’ny taom-baovao. Hitako, afaka mametraka ny tanjoko sy ny fanantenako manokana aho 2018 manana. Na izany aza, fantatro fa tena tsy manan-kery hanao izany aho. Fantatro anefa fa manompo an’Andriamanitra be fitiavana sy mahery indrindra isika. Ao amin’ny Epistily ho an’ny Romana toko faha, toko iray monja taorian’ny nitarainany momba ny sitrapony malemy, dia mamporisika antsika i Paoly hoe: Kanefa fantatsika fa ny zavatra rehetra dia mahasoa indrindra ho an’izay tia an’Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fandaharany. (Romana 8,28). Miasa eo amin’izao tontolo izao Andriamanitra, ary ny sitrapony tsitoha sy feno fitiavana dia mifantoka amin’ny hahasoa ny zanany, na inona na inona tarehin-javatra eo amin’ny fiainany.
Ny sasany aminareo dia mety nanana taona 2017 tena tsara ary tena manantena ny ho avy. Taona sarotra ho an'ny hafa izany, feno ady sy fihemorana. Matahotra ianao im 2018 mety hisy enta-mavesatra bebe kokoa ho azy ireo. Na inona na inona entin’ity taom-baovao ity, dia eo anatrehan’Andriamanitra, vonona hihaino ny vavaka sy ny fangatahana ataontsika. Manana Andriamanitra fitiavana tsy manam-petra isika, ary tsy misy dikany loatra ny fanahiana mety ho entintsika eo anatrehany. Faly Andriamanitra amin’ny fangatahantsika sy ny fankasitrahantsika ary ny fanahiantsika amin’ny resaka akaiky aminy.
Tafaray am-bavaka sy fankasitrahana,